निर्देशकले ‘कट’ भने पनि किन रोकिएनन् यी नायक नायिका ?
२०७६ फाल्गुण ४ आइतबार, काठमाडौं । चलचित्र हेर्दै गर्दा मानिसहरुलाई कलाकारहरुको कसरी ‘कोजी’ सिन दिन सक्छन् भन्ने लाग्नसक्छ । सुटिङको क्रममा धेरै मानिसको ध्यान सुटिङ गरिरहेका कलाकारमा हुने गर्छ । यस्तोमा पनि कतिपय अवस्थामा कलाकारले त्यस्तो सिनमा आफूलाई रोक्न सक्दैनन् र निर्देशकको ‘कट’ निर्देशनको पनि वेवास्ता गर्ने गर्छन् । यस्तै केही बलिउडका कहानीहरु यहाँ उल्लेख गरिएको छ । ... बाँकी अंश»
२०७६ फाल्गुण ४ आइतबार, स्टार कपलको देश र विदेशमा थुप्रै बंगला र घरहरू छन्। उनिहरू सवारी साधनहरु पनि धेरै मन पराउछन्। बच्चनसँग करिब १३ करोड रुपैयाँको मूल्याका १२ गाडी छन् । यसमा एक रोल्स रोयस, तीन मर्सिडिज, ए पोर्श तथा एक रेन्ज रोवर जस्तो विलाशी गाडी छन् । अमिताभसँग एक टाटा नानो कार तथा एक ट्याक्टर पनि छन् । यस बाहेक, दुबैसँग मुल्यवान घडि पेन लगायत साना साना चीजहरू छन् जसको मूल्य करोडौं रूपैयाँ परेको छ । ... बाँकी अंश»
दीपिकाको लिपस्टिकसँग खेलथिइन् सैफकी छोरी सारा, सेटमा उत्पात
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, साराले बताइन् उनी प्रायः सैफको फिल्म सेटहरूमा जान्थिन् र दीपिका पादुकोणको लिपस्टिकहरुसँग खेल्थिइन्। सारा आफ्नो बुबाको सेटमा धेरै चकचक गर्थिइन् र उनी श्रृंगार पनि गर्थिइन्, जसलाई उनले मनपर्ने समय बताएकी छन् । साराले भनिन् यदि उनी अलि ठूलो भएकी भए इम्तियाज सरबाट केहि सिक्ने थिए। ... बाँकी अंश»
प्रियंका र निकका परिवार जुटे बच्चाको स्वागतमा
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, काठमाडौं । भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपडा र र अमेरिकी पप गायक निक जोनसको घरमा खुशीयाली छाएको छ। जोनास परिवारमा एक पाहुना आउँदैछन्। स्रोतका अनुसार जोनास परिवार बच्चाको आगमनको खबर सुनेर अत्यन्त खुशी भएको छ। सबैजना अहिलेबाटै घरमा बच्चाको आगमनको तयारीमा जुटेका छन् । ... बाँकी अंश»
'राती ' लिएर आउदै चर्चित पप गायक दिपक बज्राचार्य
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, आजकल पार्टी जाँदा पहिला जस्तो मजा लाग्दैन, सहकर्मीहरु त्यति भेट हुदैनन , चाडपर्व पनि अलि शुन्य शुन्य लाग्छ ,मलाई मात्रै होइन, वरीपरि हेर्छु, उस्तै देख्छु,फेसबुक तिर फोटो देख्छु, कहिले विदेशमा ट्रेनका सम्पूर्ण डब्बामा नेपाली भरिएको देख्छु साथै विदेश तिर आयोजना हुने आफ्नै कार्यक्रमहरुमा उपस्थित हुने हजारौ दर्शकहरु देखेर अचम्मित हुन्छु आजकल मेरा आफ्नै साथी भाईहरुसंग नेपाल भित्र भन्दा बाहिर धेरै भेट हुने गर्छ। यस्तै कुराले सोच्न बाध्य हुन्छु, यो कस्तो मोह विदेशको? यो कस्तो आकर्षण प्रवासको? मलाई राम्रो सँग थाहा छ, बाध्यता सबैको छ। बुझेको छु रहर होइन कर होला तर पनि लाग्छ सबैलाई विदेशले मोहनी लगाएकै हो। ... बाँकी अंश»
सुष्मिता सेनको भ्यालेन्टाइन : १६ वर्ष कान्छा रोहमान र दुई छोरी
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, तस्वीरहरूमा सुष्मिता सेन रोमानसँग रोमान्टिक स्टाइलमा देखा परेकी छन् । सुष्मिता सेनले आफ्नो घरलाई सुन्दर बत्तीले सजाएको देख्न सकिन्छ । तस्विरहरु शेयर गर्दै सुष्मिताले उनका प्रशंसक, प्रेमी रोहमान शाल र दुबै छोरीहरुलाई भ्यालेन्टाइन डेमा क्याप्शन मार्फत बधाई दिएकी छन्। ... बाँकी अंश»
सनीको यो कस्तो विज्ञापन ?
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, भारतमा आईएमजी रिलायन्सका लागि जीवनशैली व्यवसायका प्रमुख जसप्रीत चण्डोकले भने, "लाक्मी फेसन वीकमा दिगोपन हाम्रो मुख्य कुराकानीको विषय हो, जसको लागि पुरा दिन समर्पित छ। यो बेला हामीले आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्नका लागि धेरै कदम चालेका छौं र अर्को पटक छालामुक्त दिगो फेशन डे तर्फ काम गर्छैं ! हामी पेटा भारत सँग साझेदारी गर्न र उनीहरूको नयाँ अभियानको लागि तत्पर छौं।" ... बाँकी अंश»
नायिका महिमाको बसको ठक्करबाट मृत्यु, आधा दर्जन फिल्म प्रदर्शनको पखाईमा
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार, नायिका महिमा सिलवालको दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ । बसले महिला सवार स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा उनीसहित उनकी बहिनी शर्मिलाको पनि मृत्यु भएको हो । ... बाँकी अंश»
सलमानले न विवाह गर्छन्, न गर्न दिन्छन्
२०७६ फाल्गुण १ बिहिबार, यसको जवाफमा सलमानले भने - जब उनी सगाई गरेर घर भित्र आईन्, असिम उनीसँग माया गर्न थाले त्यसपछि उसको बाहिरी अध्याय अन्त्य भयो। ... बाँकी अंश»
‘सक्किगोनी’ मा दयाह्याङ, ५० प्रतिशत आम्दानी रंगशालामा
२०७६ फाल्गुण १ बिहिबार, चितवनमा बन्दै गरेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण सहयोगार्थका लागि सिनेमाको ५० प्रतिशत आम्दानी जाने भएकोले यस सिनेमालाई सबैले हेरेर साथ दिन समेत धुर्मुसले अपिल गरे। ... बाँकी अंश»
बिग बोसको शुल्क बारे सलमानको खुलासा, चहान्छन् शो छोड्न
२०७६ फाल्गुण १ बिहिबार, यसअघि सलमान खानले एक एपिसोडका लागि ११ देखि १४ करोड भारु लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । सलमानले आफ्नो प्रोडक्सन हाउसको व्यापार बढाउने निर्णय गरेका थिए । प्रतिवेदनअनुसार बिग बोस १३ का लागि उनले ४ अर्ब भारु लिएका छन् । सञ्चारमाध्यममा उल्लेख गरिएअनुसार १३ साताको हुने शोमा उनले एउटा साताको दुई शोका लागि ३१ करोड भारुसम्म लिनेछन् । ... बाँकी अंश»
टीआरपीको मारमा उदित नारायण, छोरा आदित्यको विवाह जज नेहासँग
२०७६ माघ २९ बुधबार, उनले अगाडि भने, 'मलाई शंका छ, नेहा कक्कडसँग आदित्यको विवाहको अफवाह इन्डियन आइडल ११ को टीआरपी बढाउने षड्यंत्र मात्र हो, किनकि मेरो छोरो प्रस्तोता हो र नेहा शोमा एक जज हुन्। म यो अफवाह साँचो होस भन्ने चाहान्छु किनकि नेहा साँच्चै असल केटी हुन्। हामी उनीहरूलाई आफ्नो बुहारी बनाउने हिचकिचाउँदैनौं।' ... बाँकी अंश»
सौगात मल्लको ‘मन्त्र', हजारौ लाइकमा केहि डिसलाइक
२०७६ माघ २९ बुधबार, सार्बजनिक टिजरमा चलचित्रका मुख्य कलाकार सौगात मल्ल,बुद्दि तामांङ,दिया पुनलाई स्थान दिईएको छ । चलचित्रमा गोरखाको मनास्लु क्षेत्र आसपासको कथाबस्तुलाई आधार बनाईएको छ । मनास्लु क्षेत्रमा पहिलो पटक छायाँकन गरिएको चलचित्रका दृश्यहरुले दर्शकको मन जितेको छ । ... बाँकी अंश»
फागुन १६ मा हलभरि ‘धुलो’
२०७६ माघ २८ मंगलबार, सिके वाग्लेको प्रस्तुति रहेको फिल्मको निर्मातामा लक्ष्मी गौतम र नानीराम फुँयाल तथा सहनिर्मातामा दीपा धरेल छिन् । सुवास सिंह बस्न्यातको लेखन,रबिन आचार्यको छायांकन र अर्जुन जिसीको सम्पादन रहेको फिल्मको गीतको कोरियोग्राफी कबिराज गहतराज र रामजी लामीछानेले गरेका हुन । ... बाँकी अंश»
ओस्करमा 'जोकर'को भावुक मन्तव्य, जसले विश्वभर चर्चा पायो
२०७६ माघ २८ मंगलबार, 'म धेरै कृतज्ञ छु। तर नामंकन भएका अन्य साथिहरुभन्दा ज्यादा बुलन्द म छैन, किनकि हामी सबैको फिल्म प्रति समान प्रेम छ। यस अभिव्यक्तिको माध्यमले मलाई सम्झनलायक जीवन जितउने अवसर दिएको छ। मलाई थाहा छैन म फिल्ममा नभएको भए कहाँ हुने थिएँ।' ... बाँकी अंश»
आकाश छुने मुल्य भएका बलिउड स्टारका घर, कसको कति ?
२०७६ माघ २७ सोमबार, काठमाडौं । बलिउड स्टारको जीवनशैली बारे सबैको चासो हुन्छ । कलाकारको जस्तो लत्ताकपडा, गाडिघोडा, खानपिन, रहनसहन हरेक आम मानिसको चाहना हुन्छ । प्राय स्टार यसको शौखीन पनि हुन्छन् । उनिहरु आफ्नो जीवनशैली राजकीय बनाउन हर संभव कोशिश गर्ने गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
कुनै राजमहलभन्दा कम छैन शाहरुखको बंगला, मूल्य ५११ करोडभन्दा बढि
२०७६ माघ २७ सोमबार, काठमाडौं । बलिउड अभिनेता शाहरुख खानको घर 'मन्नत' कुनै राजमहलभन्दा कम छैन। मन्नत मुम्बईमा रहेका सुपरस्टारहरु मध्ये सबैभन्दा राम्रो घरहरूमा एक हो। शाहरुख खानको घर मन्नत मुम्बईको बान्द्रा इलाकामा बैडस्टैंडमा समुद्र किनारमा रहेको छ । घरको बाल्कनीबाट टाढासम्म समुन्द्रको दृश्यपान गर्न सकिन्छ । ... बाँकी अंश»
बलिउड स्टार जसको प्रेम भयो दुखद अन्त्य: बर्षौपछि पनि गर्दैनन् कुराकानी
२०७६ माघ २६ आइतबार, सन् २००४ मा शाहिद कपूर र करीना कपूर पहिलो पटक फिदा फिल्ममा सँगै देखाए। यस पछि, दुई बीचको मित्रता भयो र बिस्तारै मित्रता प्रेममा परिणत भयो। सबैलाई दुबैको जोडी मन पराए । दुई जनालेसँगै धेरै फिल्महरूमा पनि अभिनय गरे ।२००७ मा फिल्म जब वी मेटको शूटिंगको क्रममा दुईबीचको बिचको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो र बिस्तारै यो प्रेम कथाको पनि अन्त्य भयो। यद्यपि यसको कारण कहिल्यै पनि खुलाइएन । करीनाले सैफ अली खानसँग विवाह गरिन् भने शाहिद मीरा राजपूतसँग जोडिए । ... बाँकी अंश»
अमृता र सैफको विवाहमा पुगेकी करीनाले भनिन्-'बधाइ सैफ अंकल', 'धन्यवाद छोरी'
२०७६ माघ २६ आइतबार, यस बाहेक उनी आफ्नो अफेयरलाई लिएर धेरै चर्चा भइन्। उनीको नाम सनी देवल, रवि शास्त्री, विनोद खन्ना र सैफ अली खानसँग जोडिएको थियो । सैफ अमृताभन्दा १२ वर्ष कान्छा थिए तर दुबै परिवारको इच्छा बिपरित गएर विवाह गरे। सैफ र अमृताका दुई सन्तान रहेका छन् सारा अली खान र इब्राहिम अली खान। ... बाँकी अंश»
नागार्जुनसँग १० बर्ष डेटपछि तबुको किन भएन विवाह ?
२०७६ माघ २४ शुक्रबार, धेरै कमलाई थाहा होला तब्बू र अजय सब भन्दा राम्रा साथी हुन्। अजयले भने- 'काजोललाई पनि यो थाँहा छ र उसलाई यसमा कुनै समस्या छैन। उनी भन्छिन्, 'यो सामान्य भावना हो। मलाई कुनै आपत्ति छैन। ' अजयलाई यो पनि सोधिएको थियो कि 'दे दे प्यार दे' को ट्रेलर हेरेपछि काजोलले कस्तो प्रतिक्रिया देखाइन्। ... बाँकी अंश»